Nagarik News - राष्ट्रकविज्यू! 'गौरी' लाई 'गउरि' बनाइँदै छ!
वर्ण विन्यासका सुधार वादीहरूले गुरु प्रसाद मैनालीको 'शहिद' कथालाई 'सहिद' बनाएरै छोडे। झमककुमारी घिमिरेको प्रसिद्ध कृति 'जीवन काँडा कि फूल' अशुद्ध भइसक्यो। 'जीवन काँडा कि फुल' हुनुपर्ने अरे! राष्ट्रकवि घिमिरेको 'गौरी' खण्डकाव्यको शीर्षक पनि 'गउरि' नबनाउलान् भन्न सकिँदैन।
पाठकवृन्द! दुई जना चर्चित घिमिरे साहित्यकार आजका विषय बनेका छन्। एक जना हुन्, बोल्न नसक्ने तर असाध्यै बान्की परेका झुम्का जस्ता अक्षरमा हृदयस्पर्शी कुरा लेख्न सक्ने झमककुमारी घिमिरे। अचेल उनको नाम झमक कुमारी घिमिरे बनाइएको छ। झमककुमारीको मुख बोल्दैन, कलम बोल्छ। 'जीवन काँडा कि फूल?' लेखेर पुरस्कृत भएकी उनले पाएको पुरस्कारप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। शीर्षक नै अशुद्ध भएको पुस्तक कसरी पुरस्कृत भयो? आधुनिक वर्ण विन्यास अनुसार उनको पुस्तकको शीर्षक 'जीवन काँडा कि फुल?' हुनुपर्थ्यो।
'जीवन काँडा कि फूल?' र 'जीवन काँडा कि फुल?' मा अर्थगत भिन्नता खोजौँ। परम्पराअनुसार ह्रस्व 'फुल'ले अण्ड बुझाउँछ। जीवनको मूलस्रोत अण्ड हो। प्राणीका चार जातमध्ये अण्डज पनि एउटा हो। यसकारण प्रश्न उठ्न सक्छ जीवन अण्डको अर्थ दिने फुल त होइन? झमक कुमारीका चरणकमलबाट लेखिएको 'फूल' अवश्य नै संस्कृतको 'फुल्ल'बाट क्षतिपूरक दीर्घीकरण भई बनेको 'फूल' नै हो। यसरी शीर्षकसमेत अशुद्ध हुने गरी बनाइएको वर्णविन्यासको नयाँ नियम सक्रिय हुँदा अर्का घिमिरे माधवप्रसादको लोकप्रिय खण्डकाव्य 'गौरी'लाई पनि औच्चारणिक आधारमा नेपालीकरण गरी 'गउरि' बनाइदिन बेर छैन। यसको दोष चाहिँ गौरीकै जुवाइँ साहेब हेमाङ्ग राज अधिकारीमा आरोपित हुने छ। किनभने मेरा आदरणीय अग्रजले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको विषय समितिको अध्यक्ष हुँदा 'विद्या'को उच्चारण 'बिद्ध्या' गरे भन्ने तर्क तेर्स्याएर 'विद्या' लेख्नुपर्ने हुकुम जारी गराएरै छाड्नुभयो।
'पाँच सय'लाई 'पान सए' उच्चारण गरिएजस्तै गरी अचेल रेडियो र टेलिभिजनका प्रस्तोताहरूले 'ऐन'लाई 'अइन्' नभनेर 'एन्' भन्न थालेका छन्। अब 'मुलुकी ऐन' नलेखेर 'मुलुकि अइन्' लेख्नुपर्ला। 'गौरी'लाई पनि हिन्दी भाषीले झैँ 'गोरी' नभन्लान् भन्न सकिँदैन। यसकारण 'गौरी' लाई 'गउरि' बनाउनुको विकल्प छैन? लुकेर होइन, खुला मैदानमा विशाल जनसभाका बिचमा बसेर हेमाङ्ग दाइसँग वर्णविन्यासका सम्बन्धमा एक महिनासम्म बहस गर्न तयार छु, कुतर्क मान्न किमार्थ सक्तिनँ। शास्त्रार्थका लागि हेमाङ्ग दाइ नै रोज्नुको कारण छ। उहाँले नेपाली वर्ण विन्यासमा मैले जति नै अध्ययन त गर्नुभएको छैन। तर अरू विद्वान्हरूका तुलनामा उहाँ नै बढ्ता जान्ने हुनुभएको छ। उहाँको चिन्ता र विद्वत्ता प्रशंसनीय छन्। मेरो उग्र आक्रोशजस्तै पूर्वाग्रह, एकोहोरो ढिपी र अराजक अडान मात्रै उहाँका अशोभनीय दुर्गुणहरू हुन्। हाम्रो बहस भइरहेको छ। कहिले उहाँको निवासमा त कहिले टेलिफोनमा। टेलिफोनमा कहिले त हामी घण्टौँ कुर्लिन्छौँ। अबको बहस सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ। कम्तीमा पाँच सय जना नेपाली भाषाका विद्वान्हरू रहने भेला आयोजना उहाँले नै गर्नुभए हुन्छ। एक महिनाअगाडि सूचना पाउनु चाहिँ पर्छ। उहाँसँगको शास्त्रार्थमा मेरो अनुसन्धानात्मक तर्क हार्योु भने मैले वर्णविन्याससम्बन्धी विषयको विद्यावारिधिका लागि दाबी गर्ने छैनँ।